Matetika ny olona dia mieritreritra an'ireto fanontaniana ireto rehefa mividy sofa vaovao ho an'ny tranonao, izay fomba manintona kokoa, inona ny fitaovana maharitra ela, sofa na lamba lamba izay tsara kokoa? Raha ny marina, misy lafin-javatra maro tokony hodinihina raha ny teti-bola, Ampionòny, fomba, sns aorian'izany rehetra izany dia iray amin'ireo fizarana lehibe indrindra amin'ny fiainanao. Amin'ny resaka sofa vita amin'ny hoditra vs lamba, hofaritana amin'ny fomba fiainanao sy izay hiainanao izany. Noho izany, tanisainay ireo teboka etsy ambany hijerena hividianana sofa tsara indrindra ho an'ny tranonao.
Inona no hodinihina rehefa mividy sofa sy lamba vita amin'ny hoditra
Raha resaka fampiononana dia mifototra kokoa amin'ny fahatsapana manokana. Noho izany ny ataonao fotsiny dia ny manontany tena, iza no mahatsapa tsara kokoa amin'ny vatanao?
Ny fahatsapana mahazatra dia ny lamba ahazoana aina kokoa noho ny hoditra cuz malemy kokoa izy io, mora azo kokoa, ary kely kokoa ny mari-panaovan'ny toetr'andro. Fa miankina amin'ny fitaovana lamba sy ny rafitra mpanohana ihany koa. Amin'ny ankapobeny, Sofas lamba dia miaina kokoa noho ny sofas hoditra. Na dia mipetraka ela aza ianao, ny vodinanao tsy dia mafana loatra, mando sy feno zavatra, izay mahatonga ny olona hahatsapa ho mahazo aina kokoa sy mampihena ny fahasosorana. Na izany aza, zavatra iray no tokony hokarakaraina, fa ny lamba mora vidy kokoa dia hanjary ho malalaka ary hamorona fehikibo amin'ny ondana.
Raha ny sofa vita amin'ny hoditra, io matetika dia voataonan ny toetrandro. Amin'ny ririnina, ny sofa vita amin'ny hoditra dia mety tena mangatsiaka loatra ka tsy azo kitihina na apetraka, fa raha mbola maka lamba firakotra eo ianao dia hanafana hatramin'ny akaiky ny hafanan'ny vatan'olombelona. Amin'ny fahavaratra, na dia tsy manana fametrahana fametrahana mari-pana ianao, ny sofa vita amin'ny hoditra dia mangatsiaka kokoa noho ny lamba izay mahatonga anao hatsembohana sy hifikitra amin'ilay hoditra. Azo antoka, manoro hevitra izahay ny hametraka fepetra mifehy ny toetrandro, izay mitondra fampiononana bebe kokoa amin'ny toetr'andro mafana.
Amin'ny adihevitra momba ny vidin'ny hoditra vs.. sofas lamba, raha mitovy endrika izy roa, vita amin'ny endriny mitovy kalitao, lafo kokoa ny hoditra amin'ny ankapobeny.
Nikaroka tamin'ny sofa vita amin'ny hoditra sy lamba tamin'ny Wayfair aho, ny valiny teo aloha dia mampiseho ny tsy fitovizany. Ny hoditra dia avo lavitra noho ny lamba. SAINGY, misy ihany koa ny lamba mirentirenty namboarin'ireo mpamorona malaza izay mihoatra ny vidin'ireny seza hoditra ireny. Misy ihany koa ireo sofa vita amin'ny hoditra ambany ambany kokoa noho ny lamba raha tsy raisinao ho fiheverana ny fampiononana sy ny endrika ivelany. Matetika ny vidiny dia maneho ny kalitao sy ny androm-piainan'ny sofa, ka tsy isalasalana fa maharitra kokoa noho ny lamba ilay hoditra raha tsy simba amin'ny poketra.
Ary noho izany, ny voalohany tokony hoheverinao dia ny teti-bola, avy eo ny haingon-trano, firafitry ny fianakaviana. Mampidi-bola kokoa ny misafidy sofa vita amin'ny lamba mety hamonjy antsasaky ny vidiny. Ny sofa vita amin'ny hoditra dia sahaza kokoa ho an'ny olona manana toe-bola tsara na efitrano fandraisam-bahiny. Raha ny sofa vita amin'ny lamba kosa dia mety kokoa amin'ny fianakaviana marobe na ny fomba maro na ny vidiny mora azo.
Ny sezarana lamba sy hoditra dia samy manana ny endriny sy ny loko voafantina, izay tsy maintsy ampifanarahana amin'ny efitrano iray manontolo.
Amin'ny ankapobeny, ny sezon'ny lamba dia manolotra safidy betsaka kokoa noho ny hoditra noho ny volavolan'izy ireo, loko, endriny, ary teknika fanaka. Raha diniho fotsiny ny fametrahana sofa lamba avy eo rehefa manaingo ny tranonao tsy misy hokarakaraina, Azonao atao ny mahita ny fomba sy ny loko rehetra hihaona amin'ny efitrano. Io no lasa safidy voalohany ho an'ny ankamaroan'ny olona, solontenan'ny sofas amerikana be mpampiasa izay mahasoa amin'ny firafiny tery, fitaovana be pitsiny, famolavolana siantifika, famoronana kanto sy fampiononana malalaka.
Mifanohitra amin'izay aza, vitsivitsy ny haingon-trano afaka mifanaraka amin'ny sofa vita amin'ny hoditra avo lenta. Raha tsy mety amin'ny efitrano, misy vokany be pitsiny azo alefa. Azo antoka fa raha mifanaraka tsara izy io dia afaka maneho hakantony tokana amin'ny efi-trano izay sarotra averina amin'ny lamba. Ny tena fahita amin'ny hoditra dia ny fomba chesterfield izay tena fomban-drazana. Na izany aza, toy ny fitsipika, Ny sofa vita amin'ny hoditra matetika dia mazàna kokoa noho ny mitovy aminy amin'ny lamba. Raha aleonao manana endrika ankehitriny sy maoderina, mirona hiseho marevaka sy avo lenta kokoa noho ny ankamaroan'ny sofa vita amin'ny lamba izy io.
Na sofa na lamba vita amin'ny hoditra dia samy manome ny hakantony sy faran'izay tsara ho an'ny tranonao izy rehetra, ny efitranonao, ny efitranonao, na ny efitranonao. Noho izany, miankina amin'ny safidinao manokana izany. Tianao ve ny sofa anao ho singa lehibe famolavolana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahininao? Fomba haingo iza no tianao, antitra na maoderina? Manantena ve ianao fa ho mora kokoa amin'ny tranonao?? Izay ihany no hodinihintsika rehefa misafidy sofa.
Ankoatry ny fampiononana, vidiny sy fomba, fikojakojana mety ho antony lehibe hisalasalana. Ny hoditra dia tena mora diovina ary mandany fotoana kely kokoa, fa ny lamba kosa dia mila hosasana ary diovina matetika. Ny sofa vita amin'ny hoditra dia mety haharitra am-polony taona maro raha karakaraina tsara. Na izany aza, raha tokony hasiana fikajiana tsy tapaka hisorohana ny triatra sy ny fisarahana.
Noho ny endri-javatra tsy tantera-drano, ny ataonao dia ny mandena tanteraka ilay lamba famaohana amin'ny rano madio, esory izy ary hamafana ny tampon'ny seza. Na izany aza, raha ho an'ny fikojakojana maharitra dia mila menaka sy savoka manokana. Ankoatry ny, raha vantany vao simba ara-batana ny sofa vita amin'ny hoditra, ny fonony ivelany tsy azo soloina, izay sarotra kokoa ny mandray azy. afa-tsy, ny biby sasany toa ny saka dia zatra manaingo ny sofa. Raha misy fahasimbana, fonosana seza sofa na mividiana kilalao mba tsy hanelingelina ny saka. Tsara homarihina fa somary sarotra ny mitazona ireo sofa vita amin'ny hoditra ary sarotra ny manamboatra azy ireo ny gorodona, ka raha manan-janaka na biby fiompy ao an-trano ianao, sofas lamba dia mety kokoa.
Raha ny lamba, mety kokoa sy tsotra ny mitazona azy io. Ny ankamaroan'ny sezaky ny lamba dia azo esorina sy hosasana. Raha heverinao fa manahirana ny miatrika an'ity fanaka maloto ity, azonao esorina izy ary alefa any amin'ny mpanadio maina. Raha manahy momba ny hafanana ianao dia apetraho fotsiny ny farafara rehefa tonga ny fahavaratra ary soloina pad mafana amin'ny ririnina. Na izany aza, ny seza lamba dia handeha ho pilina ary hanao mahia manify amin'ny fampiasana matetika, noho izany ny fisafidianana sofa avo lenta dia mety hampihena ny risika.
Ny sezaky ny lamba amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny landy, satin, hemp, corduroy sy fitaovana tsy mahazaka akanjo hafa. Per dia manana ny mampiavaka azy. Ny sofa vita amin'ny landy sy satin dia mampita ny hakantony sy ny haitraitra, manome ny olona fahatsapana mahatalanjona. Na izany aza, ny hemp sy sofas corduroy dia toa mavesatra sy mahazatra, ary toa mamorona fomba voajanahary sy tsotra.
Ny safidy ho an'ny akora sofas hoditra dia lehibe, KOA. Ny hoditra samy hafa dia miteraka vokatra hafa tanteraka. Ny endri-javatra momba ny sofa dia mifantoka, elastika voajanahary, ny hamafin'ny volon'omby, ambonin-javatra marefo, fahamendrehana miloko ambony, elastika tsara, permeability rivotra, ary tanjaka mekanika avo. Ny tena miavaka dia ny herin'ny ranomaso avo sy ny tanjaka mihombo izay manatsara ny androm-piainan'ny sofa. Mizara roa matetika izy ireo, hoditra manify na matevina. Ny famolavolana sofa vita amin'ny hoditra manify dia miendrika fomba tsotra sy mamirapiratra.
Ny sofa vita amin'ny hoditra avo lenta dia malemy paika raha mikasika azy, mahazo aina hipetraka, mafana amin'ny ririnina ary mangatsiatsiaka amin'ny fahavaratra. Noho ny firafitra tsara kokoa, ny vidiny dia lafo kokoa noho ny lamba. Betsaka ny karazana sofa vita amin'ny lamba izay manome ny olona fahatsapana samy hafa. Ny sofa vita amin'ny lamba landy dia mampita fahatsapana mendri-kaja amin'ny olona hatrany, ary sofas vita amin'ny hemp dia tsotra kokoa. Avy amin'ny fomba fijery ara-materialy, sofas hoditra dia mateza kokoa.
Misy ny zava-misy fa matetika isika tsy niraharaha fa ny sofa hoditra dia hypoallergenic. Raha misy olona tsy mahazaka tontolo iainana, avy eo ity dia mety ho tsy misy ilana azy na tsara ny sofa. Tsy toy ny sezaky lamba, ny sofa vita amin'ny hoditra dia mamandraka vovoka vitsy an'isa, biby mandehandeha, sy ny allères hafa, izay mety hiteraka allergy. Noho izany, ampitahao amin'ny sezaky lamba izay nanome fandriana mafana ho an'ny tsy mahazaka alokaloka amin'ny alàlan'ny hoditra mazava ho azy, toa safidy tsara kokoa izany. Azo antoka, tsy azo atao ny mitazona sofa lamba tsy misy alergen, fa ho lany fotoana bebe kokoa izany ary mila ezaka bebe kokoa noho ny fandriana hoditra amin'ny lavitra
Ireto misy fanontaniana mahasoa apetraka amin'ny tenanao rehefa mividy lamba na sofa vita amin'ny hoditra:
Manana biby fiompy ve ianao?? Zanakao ve ny biby fiompinao?? Amporisihinay matetika ny lamba ho an'ny tompona biby satria mety manala ny hoditra lafo vidy amin'ny volony izy ireo. Na izany aza, raha mpanazatra mahay momba ny biby fiompy ianao, avy eo samy tsara.
Manan-janaka ve ianao? Mora tratran'ny lozam-pifamoivoizana ve izy ireo?? Matetika milalao amin'ny sofa ve izy ireo? Raha eny daholo, Matokia ahy, ny hoditra dia mety hanompo anao raha oharina amin'ny lamba. Raha saika tsy misy fomba hialana amin'ny famoretan'ny zaza, ilaina ny drafitra fanaraha-maso ny fahasimbana.
Ny sezalanao dia ho mpiara-miasa maharitra izay mila taratry ny fiovanao ary mitantana ny filanao fialan-tsasatra. Na dia misafidy lamba vs.. sofa vita amin'ny hoditra (na ny mifamadika amin'izany) mety toa safidy estetika, hisy fiantraikany amin'ny faharetan'ny sombin-javatra ao an-tranonao izany. Soa fa manana safidy betsaka eto an-tanana isika.
Ahoana ny fomba hijerena rehefa mividy sofa vita amin'ny hoditra sy lamba
1. Zahao ny lamba famaohana ivelany izay tsy maintsy ho ampy tsara. Hamarino tsara fa tsy misy ketrona sy valety tsy ilaina eo amin'ny endrika ivelany.
2. Ny fisaronan'ny soson'ny sofa dia tokony ho fisaka, tsy misy farango, fantsika mivoaka, na foto-tsakafo, izay handratra olona sy akanjo rovitra.
3. Raha mikasika ny vy na hazo fisaka ianao, mbola mahatsapa ny zoro efa misy izay midika fa ny firakotra manarona dia mora entina ao anatin'ny fotoana fohy, indrindra eo akaikin'ny toerana ipetrahana.
4. Diniho raha mifanaraka tsara ireo lamina, ary ny zaitra ampiasaina amin'ny haingon-trano dia mitovy elanelana.
5. Ny cushion dia tsy tokony hiantona amin'ny sisin'ny seza. Ny fifandraisana dia tokony ho tery araka izay azo atao eo anelanelan'ny ondana, armrests, backrest, ary ny sofa.
6. Hamarino raha marin-toerana ny sandry sy ny tongony amin'ny sofa, malama ny tampon-kazo. Ny cushion dia tsy maintsy manana fanohanana ampy ary mifanaraka amin'ny lamosin'ny lamosina.
7. Ny sezakaly hoditra matetika dia misy fanesorana chromatic tsy fantatra, na tasy kely aza, koa tandremo ny loko hoditra manodidina ny toerana rehetra.
Karazan-damba sy lamba vita amin'ny hoditra
Ny ankamaroan'ny mpanjifa dia mety tsy hahafantatra ny karazana lamba fisaka sy ny hoditra izay manampy koa haka ny lamba na ny hoditra. Ny karazan-damba amam-baravarana dia kofehy voajanahary na kofehin'olombelona. Ity misy fampidirana fohy ireo kofehy lamba ho hitanao rehefa miatrika safidy lamba hafa.
Ny kofehy voajanahary dia fitaovana filament mitohy avy amin'ny zavamaniry na biby. Mora malemy izy ireo, tsara tarehy handravaka sy mahafinaritra, mahazo aina mikasika. Misy kofehy voajanahary efatra toy ny endri-javatra etsy ambany.
Tazomy ny hafanana sy ny hafanana; Mateza, lanja noho ny lamba hafa; Miketrona sy mahazaka tasy; Mitafy loko mora, mahazaka; Antibacterial, manohitra ny fofona
Milamina ny atiny, malefaka nefa tsy malama; Fikolokoloana ny hoditra sy ny volo noho ny albumen an'ny sela voajanahary; Ny loko sy pirinty tsara; Malemy noho ny hatsembohana, Masoandro, savony; Manohitra ny tany, maty fotsy, ary samoina; Mila fikarakarana manokana, fanadiovana maina
Mahazo aina sy miaina; Taratasy voajanahary tsy misy akora simika.; Hypoallergenic ary tsy mahasosotra ny hoditra.; Azo havaozina sy voajanahary.; Fanasana milina.; Mora mihena sy ketrona be.; Mavesatra haingana kokoa ny kofehy voajanahary
Fibre voajanahary miaraka amin'ny fahalotoan'ny tontolo iainana ambany; Miasa mafy amin'ny famokarana; mazava ho, manilika bibikely; Mitroka ny hamandoana tsara - hatramin'ny 20% ny lanjany; Hangatsiatsiahana sy fahasalamana miavaka amin'ny toetr'andro mafana sy mando; Hypoallergenic, mety amin'ny hoditra marefo na tsy mahazaka; Voakasiky ny ahitra sy ny hatsembohana; Sarotra ny manaisotra ny felana
Lehilahy nanao kofehy
Ny fibre ataon'ny olombelona synthetic dia nataon'ny olombelona tamin'ny alàlan'ny synthesis simika, mifanohitra amin'ny kofehy voajanahary izay nalaina mivantana tamin'ny zavamananaina velona. Anisan'izany ny nylon, polyester, acrylic, volo polyolefin, sns. Ireto ny fiasa amin'ireo karazana kofehy vita amin'ny olombelona ireo.
Manohitra ny mihinjitra sy mihena; Azo sasana na maina-cleanable; Fikarakarana mora satria mahazaka ketrona, manjavona.; Manohitra ny ankamaroan'ny zavatra simika; Tsy hamonoana na hisotro rano; Olana mijanona sy mihombo; Sarotra ny manaisotra tasy solika; Tsy tia tontolo iainana
Novokarina avy nandrotsaka ireo plastika plastika, mora mirehitra tokoa; Hery matanjaka avo; Mateza, mahatohitra fandotoana; Tsara sy fonony tsara; Mihazona ny lokony ; Fananana fatorana tsy dia tsara, sarotra loko; Ireo fitaovana dia afaka mampiseho fahasimbana
Maivana, malefaka, ary mafana, tanana toy ny volon'ondry; Afaka maka tahaka ny kofehy hafa, toy ny landihazo; Mandoko amin'ny loko mamirapiratra; Non-allergenic; Manohitra samoina, SOLIKA, simika, tara-masoandro; Manala ny hamandoana amin'ny vatana ary azo sasana; Mijaly amin'ny olana amin'ny pilina sy pilina
Mahery nefa milanja ambany noho ny fibra ampiasaina amin'ny ankapobeny; Fitaovana manitatra indrindra ; Mitroka hamandoana be, miaina.; Tena mahatohitra ny abrasion, bobongolo, holatra sy ketrona; Sasana mora foana, ary mahatohitra ny fiparitahan'ny solika.; Voakasiky ny tara-masoandro sy, mavo miaraka amin'ny taona; Fanoherana ny solika sy ny ankamaroan'ny zavatra simika; teboka ambany sy mirehitra ambany
Mora ny mandoko ary mamokatra loko mazava
Nampidirina ho mitovy landy, volonondry, na landihazo
Ataovy mitovy tantana, mateza sy tsy lafo
Tsy misy olana mijanona na mandefitra
Matetika ampiasaina amin'ny fifangaroana
Miketrika mora foana raha tsy voakarakara esp
Mora mandray ny hamandoana, menaka amin'ny vatana, sy rano
Fitaovana fitondra mandehandeha ampiasaina amin'ny vanim-potoana mangatsiaka
Fampisehoana tantera-drano tsara
Mifangaro amin'ny fomba haingo samy hafa
Malemy ary manana endrika mirentirenty
Reraka haingana amin'ny fampiasana
Mpitsoka vovoka be
Hoditra vita amin'ny hoditra sy ny lamba - ny tena mifangaro ho an'ny fomba rehetra
Na eo aza ny fanomezana sosokevitra be dia be, Mieritreritra aho fa mbola misy olona misalasala manapa-kevitra hoe iza no tsara kokoa ho an'ny hoditra na lamba. Eto izahay dia haneho hevitra tsara hafa hanana roa ao amin'ny efitranonao sy hampifangaro ny sofa vita amin'ny hoditra sy lamba tsara tarehy izay hifanaraka amin'ny atiny amin'ny fomba mahatalanjona.
Samy sofa mifono hoditra sy lamba miharo afovoan-tany sy Mediteraneana, maneho ny firafitra manankarena sy malefaka, loko tsy miandany ary mampihetsi-po. Ny sofa vita amin'ny hoditra dia karazana fanaka mahazatra izay nifamatotra tamin'ny rendrarendra sy ny fiotazam-boaloboka. Fitafiana lamba, etsy ankilany, mampita fampiononana iraisana, hafanana sy fahatsapana ho ao an-trano. Afangaro amin'ny interiors ambanivohitra izy ireo indray mandeha, ny lamba famaohana sofa sy hoditra dia hampiseho endrika manintona izay toa mandray ireo vahiny hitsidika azy. Ny ondana malefaka amin'ny tonony mangina dia fanampiny tsara amin'ny sofa. Ny lamina voninkazo sy voaravaka amin'ny sofa dia mamoaka firavaka manintona iray hafa ho an'ny haingon-trano anatiny. Alao an-tsaina fotsiny hoe mipetraka eo akaikin'ny afo ianao ary mankafy ny vaky kitay sy ny dihin'ny afo. Tsy aleo ve mahafinaritra sy fandriam-pahalemana anaty lehibe?
Sofa sy hoditra, na dia efa mahazatra aza ny famolavolana nentim-paharazana kokoa, hitanay ny toerany ara-dalàna amin'ny atitany maoderina. Tsipika mitsangana sy marindrano, ny loko mifanandrify sy mifanohitra dia manasongadina ny endrika maoderina tsy manam-paharoa, izay fahitana mahazatra an'ny sofa ankehitriny. Ny paleta miloko dia mifantoka amin'ny mainty mahazatra, fotsy madio, bleu marine, na ny fitambaran'ireo sakana loko ireo, ary koa ny loko volondavenona miovaova. Ny volondavenona dia toa mitovy tsara amin'ny mainty na fotsy. Ny fifangaroan'ny hoditra sy ny lamba dia manome ny fampiononana sy ny fomba tsy mahazatra farany fa tsy hafahafa mihitsy. Ny sezaran-tsarimihetsika na sofa zoro tsara tarehy no toerana hipetrahana ho an'ny vahininao sy ny fianakavianao, izay mifangaro mora foana amin'ny atitany ankehitriny sy minimalista. Ny ondana haingon-trano dia matetika misy loko fototra na alokaloka vitsivitsy amin'ny loko iray tsy misy lamina haingo. Ny sofa vita amin'ny hoditra sy ny lamba misy endrika maoderina dia natao ho ivon'ny efitrano sy resaka ifampiresahana. Ny fikirakirana maoderina dia manome ny fahafaha-mandanjalanja hanamboarana ny seza arakaraka ny filanao sy ny safidinao.
Ny sofa dia toerana tena ilaina ao amin'ny efitrano iray manontolo anajanonanao ny fanahiana, reraka sy toe-po ratsy. Toerana miseho zavatra mahaliana sy mafana isan'andro. Mino aho fa sarotra ny misafidy ny hoditry ny hoditra na ny lamba amin'ny maodely an'arivony. Na izany aza, tsy mazava ny valiny hoe iza no tsara kokoa ary miankina aminao sy ny fianakavianao izany. Raha mbola mahafeno ny fepetra takinao sy mifanaraka amin'ny haingon-trano io, izany dia ho zavatra mahafinaritra voafantina.
← Lahatsoratra teo aloha
Lahatsoratra manaraka →
Tags: Mividiana seza sofa
Fotoana fandefasana: 2020-11-27